ယင်းမာပင်မြို့နယ် ဝါးစိမ်းတောင်တွင် ကြေးနီနှင့် သတ္တုတူးဖော်ရန်ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း စမ်း? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ယင်းမာပင်မြို့နယ် ရှိ ဧကတစ်သိန်းကျော်ကျယ်ဝန်း သော ဝါးစိမ်းတောင်ဒေသတွင် ကြေးနီနှင့် ဆက်စပ်သတ္တုရှာဖွေ ရေး စမ်းသပ်တိုင်းတာမှုနှင့်ထွက်ရှိ နိုင်စွမ်းလေ့လာရေးအတွက်ဆောင် ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းမာပင် မြို့နယ်ရှိ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ထံမှသိရသည်။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရန် ယင်း မာပင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးသို့ မြေစာရင်းပုံစံကူးယူခွင့် နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တောင်း ခံထားကြောင်း သိရသည်။
ဝါးစိမ်းတောင်တွင် ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးနှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာ ဖွေရေးဦးစီးဌာနနှင့် လက်ရှိ၊ စံ ပယ်တောင်ကြေးစင်တောင် ကြေး နီသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ကိုင်နေ သော မြန်မာယန်စီကုမ္ပဏီတို့ အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီး ကြေးစင် တောင်စီမံကိန်း၏ တိုးချဲ့လုပ် ကွက်အဖြစ် စမ်းသပ်တိုင်းတာ ရန် စီစဉ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ”မနှစ်က ဒီဇင်ဘာလကတည်း က ဒီသတင်းကိုကြားနေလို့ ဝန်ကြီး ချုပ်ဆီမှာ ကျွန်မတို့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ သွားမေးသေး တယ်။ သူတို့ဘာမှမသိသေးဘူး ပြောတယ်။ အခုတိုင်းအစိုးရက နေ ထွေအုပ်ဆီမှာ သဘောထား မှတ်ချက်တွေတောင်းမှ ကျွန်မတို့ သိရတာ။ သဘောထားမှတ်ချက် တွေရလာရင်တော့ ကျွန်မအနေ နဲ့ ဆွေးနွေးမေးမြန်းတာတွေလုပ် မယ်။ လူထုရဲ့သဘောထားက အဓိကပဲ”ဟု ယင်းမာပင်မြို့နယ် မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဒေါ်အောင်မေရီကပြော သည်။ ဝါးစိမ်းတောင်သည် အမြင့် ပေတစ်ထောင်ခန့်ရှိပြီး သစ်ပင် မျိုးစုံနှင့် တိရစ္ဆာန်ပေါင်းစုံနေထိုင် ကျက်စားကာ လက်ရှိတူးဖော်နေ သော လက်ပံတောင်းတောင်ကဲ့သို့ တောင်လုံးရေ ၃၃ လုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထားသော တောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့က နောက်ဆုံး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးမယ့် ဌာနပေါ့။ အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းဆီ ကို ယန်စီကုမ္ပဏီကလျှောက်လို့ တိုင်းအစိုးရကို သဘောထားမှတ် ချက်တောင်းတာပါ။ အခုလုပ်မယ့် ထဲတော့ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီမပါတော့ ဘူး။ စံပယ်တောင်ကြေးစင်တောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွေကလည်း ပြီး တော့မယ်။ ဒီအတွက် နောက်ထပ် သတ္တုသိုက်တစ်ခုရှာဖွေတာပေါ့။ သဘောထားမှတ်ချက်တွေထောက် ခံမှ အဲဒီမှာလေ့လာမှုတွေလုပ်မှာ” ဟု သတ္တုတွင်းဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးရုံးခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးဦး အောင်နိုင်ကပြောသည်။
ဝါးစိမ်းတောင်ဒေသတွင် ယင်း မာပင်မြို့နယ်နှင့် ကနီမြို့နယ်မှ ကျေးရွာများတည်ရှိသည်။
ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖိုရမ်ကို ရန်ကုန်မြို့၌ လာမည့်နှစ်တွင် ပြုလုပ်မည်
ကျုံထော်ရေတံခွန် ပတ်ဝန်းကျင်၌ မြေမြှုပ်မိုင်းများ ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးနောက် အပန်းဖြေ အနားယူသ
ကောင်းမှုတော် စေတီတော်ကြီးအား အဖြူရောင် သင်္ကန်းတော် ပြန်လည် ကပ်လှူရာတွင် Mineral Paint စနစ်ကို ပြောင?
အစိုးရ သက်တမ်းဝက် ကာလအတွင်း လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မှာ ယခင်ထက် ပိုမိုဆိုးရွားလာ ဟုဆို